Ahoana ny fampitomboana ny sandan'ny Hetsika amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hampitomboana ny lanjan'ny Hetsika amin'ny Apple Watch
Ary maro ireo mpampiasa manontany anay ny momba an'io satria vao avy nividy Apple Watch vaovao izy ireo. Tsotra tokoa ny valiny saingy Marina fa io habetsaky ny Kcal tianay hodorana io dia tsy novaina isan'andro ao anatin'ny iray andro na ny marimarina kokoa dia ataovy toy ny valindrihana amin'ny androntsika, noho izany dia azo atao ny mahita ny tenantsika ao anatin'ny toe-javatra te hampitombo io isa io ary tsy mahalala ny fomba anaovany azy.
Averina indray fa zava-dehibe ny mazava fa ny fomba tsara indrindra ahazoana tarehimarika tsara dia ny mitifitra avo kely foana, amin'ity fomba ity na dia tsy manarona ny isa isan'andro aza isika dia hihoatra ny marika voalohany (na saika matetika) toy izany tena hahasoa ny vatantsika izany.
l Ny faritry ny hetsika dia mampiseho hoe kaloria mavitrika firy no nodoranao hatreto. Ny fanatratrarana ny tanjon'ny Daily Movement amin'ny alàlan'ny fandoroana kaloria mavitrika isan'andro dia midika fa tsy mihetsika be loatra isika ary mihetsika kaloria, tsy toy ny kaloria amin'ny fitsaharana, dia ireo izay dorana amin'ny fijoroana na amin'ny fijanonana ho mavitrika hatrany. Azontsika atao ny mampiakatra na mampidina an'io isa io araka ny itiavantsika azy, tsy toy ny tanjon'ny Fanatanjahan-tena na Mijoro izay tsy azo ovaina.
Noho izany dia mila miditra ao amin'ny app fotsiny isika Hetsika Apple Watch ary tsindrio mafy ny efijery rehetra (ForceTouch) ka safidy roa no miseho: Famintinana isan-kerinandro na fanovana tanjona hifindra, mifidy ny faharoa isika ary afaka manova ny tanjona. Tsotra toa an'io. Tokony ho mazava fa mba hahatratrarana ireo fanamby arosonay ao amin'ny fampiharana ny Asa dia ilaina ny mitohy, koa avia, omeo lalana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fomba hampitomboana ny lanjan'ny Hetsika amin'ny Apple Watch